I-Squeak e-Moor Farm - I-Airbnb
I-Squeak e-Moor Farm
Godshill, England, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Amy
Enye yezindawo ezine zokuguqulwa ezivuselelwe kahle ezitholakala ngaphakathi kwepulazi le-Moor, elisendaweni yasemaphandleni eyi-1/2 mile kuphela ukusuka edolobhaneni elihle lase-Godshill. Suka kukho konke, ngokuhamba nezindlela zamabhayisikili ngokoqobo emnyango wakho! Epulazini sinezinkukhu nezingulube, ezihlinzeka ngokuzijabulisa okunempilo (namaqanda amasha!) ezinganeni nakubantu abadala ngokufanayo! Ikotishi lihlome kahle, unengadi yakho yangasese futhi ezinyangeni ezibandayo ungathola ukuthokomele endlini eduze kwesitofu esivuthayo sezinkuni.
I-Squeak inendawo yokuhlala evulekile yonke isezingeni elilodwa enosofa, isihlalo esinesihlalo sokuzivikela kanye nesitofu esivuthayo sezinkuni kanye netafula lokudlela. Ikhishi lihlome kahle, sihlose ukuhlinzeka ngekhaya kusuka kokuhlangenwe nakho kwasekhaya ngakho zonke izitsha ezidingekayo kanye nemishini inikezwa. Umbhede ongusayizi wenkosi unethezekile ngezingubo zikakotini ezingu-100%. Kukhona ukufudumeza okungaphansi kulo lonke, ukubukwa okuhle kwezindawo zasemaphandleni ngaphambili nangemuva kwekotishi. Engadini yakho yangasese kukhona itafula nezihlalo, i-BBQ nomgodi womlilo. Izinkuni zesitofu zinikezwa wena ezinyangeni zasebusika futhi noma yikuphi okunye okudingayo ungathengwa esitolo. Esitolo esincane kukhona izinto eziyisisekelo ezimbalwa kanye namaqanda amasha ezinkukhu zethu!
Sinikeza ubhavu oshisayo ongawuqasha ngezindleko ezengeziwe (£225 ngempelasonto noma ubusuku obu-4 kanye no-£290 ubusuku obungu-7), lokhu kuzobekwa engadini yakho - indawo enhle yokujabulela ukushona kwethu kwelanga okumangalisayo kuyo! Uzodinga ukubhukha kusenesikhathi ukuze unikezwe lokhu njengoba kungaphansi kokutholakala. Sicela usithinte uma ungathanda eyodwa ngaphambi kokubhukha ukuze siqinisekise ukuthi iyatholakala.
I-Godshill iyidolobhana elitholakala kahle enhliziyweni yeSiqhingi okwenza kube indawo enhle yokuhlola lesiQhingi kuso. Indawo eseduze nayo igcwele ubumnandi obusuka esigodini esiyimodeli e-Godshill ukuya ohambeni oluya esangweni le-Free Mantle. Ipulazi le-Moor litholakala kumzila we-Red Squirrel okuyindlela yamabhayisikili kukhona nokuhamba okuningi ngqo emnyango wakho. Ungahamba uye edolobhaneni ngemizuzu eyi-10, lapho kukhona ama-pubs / amathilomu / izitolo zezipho kanye negrosa encane / ihhovisi leposi.
Ukuphatha amakotishi kwenziwa yimina (Amy), angihlali esizeni kodwa ngihlala endaweni. Umfowethu kanye nodadewabo kadadewabo, u-Hugh no-Emma, bahlala e-Moor Farm House, bazohlose ukukwamukela ngokushesha ngemva kokuba usuzinzile.
Ngiyaxhumana uma kukhona okudingayo, inombolo yami ikufolda eyamukelekayo endlini encane, ngicela ungithinte uma kukhona okudingayo ngesikhathi uhlala.
Ukuphatha amakotishi kwenziwa yimina (Amy), angihlali esizeni kodwa ngihlala endaweni. Umfowethu kanye nodadewabo kadadewabo, u-Hugh no-Emma, bahlala e-Moor Farm House, bazohlose u…